သော်တာသစ် ● ရေပေါ်ဆီအမျိုးသမီးဝါဒီ၊ နယ်ချဲ့ဝါဒနှင့် ဂျန်ဒါ | MoeMaKa Burmese News & Media
သို့သော် အစွန်းရောက်သော ဣထိယ၀ါဒလည်း ရှိပါသည်။ ရှိနေဆဲလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၆၀ – ၇၀ နှစ်ကာလများတွင် ဣတ္ထိယ၀ါဒ ဒုတိယလှိုင်းလုံးနှင့်အတူ အမျိုးသမီးများ လိင်လွတ်မြောက်ခွင့်၊ အမျိုးသမီးများ၏ လုပ်အားကို အသိအမှတ်ပြုရေး၊ အလုပ်လုပ်ရာတွင် တန်းတူညီမျှအခွင့်အရေးတို့ကို တောင်းဆိုကြရာတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများ ဖိနှိပ်ခံရမှု အလုံးစုံသောအခြေအနေများအတွက် အဓိကတရားခံဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သော အမျိုးသမီးများအားလုံးကို ဖိနှိပ်ခံရသူများရှုထောင့်ကနေ၍ သိမ်းကျုံး ရှုမြင်ခြင်းသည် ယေဘုယျဆန်လွန်းနေခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသမီးများအကြားတွင်တောင် ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ပညာအရည်အချင်း၊ ကိုယ်လက်အင်္ဂါပြည့်စုံခြင်း၊ မပြည့်စုံခြင်း စသည့်အကြောင်းအချက်ပေါ်မူတည်ပြီး ခွဲခြားခံရသည့် ပုံစံများ ကွာခြားနိုင်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ အမျိုးသမီးများအားလုံး တန်းတူဖိနှိပ်ခံနေရသည်ဟု မဆိုနိုင်ပါ။
ဖွံ့ဖြိုးပြီးသားနိုင်ငံများက ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများရှိ အမျိုးသမီးတို့၏ အခွင့်အရေးကို မြှင့်တင်ပေးမည်ဆိုသော လုပ်ဆောင်ချက်များတွင် အောက်ခြေ၏ အမှန်တကယ် လိုအပ်ချက်နှင့် ခံစားချက်ကို ဂရုထားမလေ့လာဘဲ အထက်ကသာ ဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်သော ဖြစ်ရပ်များလည်း ရှိပါသည်။ ၎င်းမှာ ဣတ္ထိယ၀ါဒကို ကိုယ်ကျိုးအတွက်အသုံးချခြင်း (သို့မဟုတ်) ဖွံ့ဖြိုးပြီးသားနိုင်ငံနှင့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံရှိ အမျိုးသမီးများအားလုံး၏ ခံစားချက်နှင့် ကြုံတွေ့နေရသည့် အခက်အခဲများကို ထပ်တူတန်းညှိပုံဖော်ခြင်း၏ ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်။ နယ်ချဲ့ဝါဒဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ရန် ဣတ္ထိယ၀ါဒကို ပုံဖျက်ကာအသုံးချခဲ့ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။ အရှေ့တိုင်းသားတို့ကို အရိုင်းအစိုင်းများ၊ ရိုးရာအစဉ်အလာကို ဖက်တွယ်ထားသည့် ခေတ်မီအတွေးအခေါ်မရှိသူများ၊ လူ့အခွင့်အရေးကို နားမလည်သူများ၊ ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်စဉ် နိမ့်ကျသူများဟု ချိုးနှိမ်မှတ်ယူကာ ၎င်းတို့ကို ကယ်တင်ပေးရန်မှာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးသော လူဖြူတို့၏ တာဝန်တရပ်ဟူ၍ ကိုင်စွဲထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သည်အထဲတွင် ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျသော ကမ္ဘာတောင်ခြမ်းနိုင်ငံများ၏ ရိုးရာအစဉ်အလာများက အမျိုးသမီးများအပေါ် မည်သို့ ခွဲခြားဆက်ဆံသည့်အကြောင်းကို အထူးဇောင်းပေး ဖော်ပြကြသည်။ ဥပမာ – ကိုလိုနီခေတ်တွင် အင်္ဂလိပ်တို့ သိမ်းယူထားသည့် ကိုလိုနီနိုင်ငံများရှိ အမျိုးသမီးတို့၏ ဘ၀အခြေအနေ နိမ့်ကျပုံကို အနောက်တိုင်းစာရေးသူတို့က ရေးသားဖော်ပြ၍ နယ်ချဲ့ရခြင်း၊ ၎င်းတို့ကို အုပ်ချုပ်ရခြင်းမှာ ဖြစ်သည့်ဖြစ်ထိုက်သည့်နည်းလမ်းအဖြစ် ရည်ညွှန်းကြပါသည်။
၁။ Featherstone, L. (2016, February 28). Hillary Clinton’s Faux Feminism. Retrieved March 5, 2016, from Truthout: http://www.truth-out.org/opinion/item/35006-hillary-clinton-s-faux-feminism
၂။ Liddle, J., & Rai, S. (1998). Feminism, imperialism and orientalism: The challenge of the ‘Indian woman’. Women’s History Review, 7(4), pp. 495-520.